Show All Most Popular Cutlery Breakfast Set Chicken Rice.AT Hello Kimchi Menu Imperial Steamed Dian KSP (Taiwan) Lonema Village Menu My Nasi Lemak Menu Shan & Kachin Food (Shwe War Eain) Sushi Yume Menu Thai Food Stall The Street - Burger & Grill Yong Tofu Set Menu Yogurt Beelatyay Special Bubble Milk Tea Fresh/ Lemon Tea Fruit Tea Fruit Tea Chizu Hot Drinks Milk Tea Smoothie Soda and Syrup Juice Mr. Xiang Guo
Hello Kimchi Menu
Lonema Village Menu
My Nasi Lemak Menu
Shan & Kachin Food (Shwe War Eain)
Sushi Yume Menu
The Street - Burger & Grill
Yong Tofu Set Menu
Fresh/ Lemon Tea
Fruit Tea Chizu
Soda and Syrup Juice
People Park, Dhammazedi Road Entrance, Near Happy Zone, Yangon, MM Dagon
Gilled Pork Rind (ဝကျခေါကျကငျ)(ဝက်ခေါက်ကင်)
Sweet Pork (ဝကျခြို)(ဝက်ချို)
Pork Rind (ဝကျခေါကျ)(ဝက်ခေါက်)
Set Pork Kimchi Jigae Rice with Side Dish
Grilled Chicken Thigh with BBQ Sauce & Mashed Potato
Shrimp Dumpling (နိုငျလှနျ ပုစှနျ)(နိုင်လွန် ပုစွန်)
Grilled Sweet Pork (ဝကျခြိုကငျ)(ဝက်ချိုကင်)
Siu Mai (ကွကျသား အသားပေါငျး)(ကြက်သား အသားပေါင်း)
Chicken Rice (ကွကျဆီထမငျး)(ကြက်ဆီထမင်း)
A. Hot Coffee/Tea + Kaya Toast + Half Boil Egg
B. Hot Coffee/Tea + Butter Toast + Half Boil Egg
Grilled Chicken with Sweet Pork (၀ကျခြိုကွကျကငျ)(၀က်ချိုကြက်ကင်)
Grilled Chicken with Pork Rind (ဝကျခေါကျကွကျကငျ)(ဝက်ခေါက်ကြက်ကင်)
Set Stone Bibimbap with Side Dish
Set Pork Bossan Rice with Side Dish
Set Soon-dubu Jigae Rice with Side Dish
Set Prawn Dwen-Jang Jigae Rice with Side Dish
Set BBQ Pork Rice with Side Dish
Set Bulgoki Rice with Side Dish
Set Spicy Bulgoki Rice with Side Dish
Kimchi Fried Rice with Side Dish
Set Pork Cutlet Karae Rice with Side Dish
Zazang Myun (ကိုရီးယားပဲခေါကျဆှဲ)(ကိုရီးယားပဲခေါက်ဆွဲ)
Original Noodle Topokki
Chicken Crystal Dumpling (ကြောကျစိမျးအသားပေါငျး)(ကျောက်စိမ်းအသားပေါင်း)
Vegetable Chicken Dumpling (သီးရှကျစုံအသားပေါငျး)(သီးရွက်စုံအသားပေါင်း)
Golden Bun (ထောပတျဘဲဥနို့ပေါကျစီ)(ထောပတ်ဘဲဥနို့ပေါက်စီ)
Thai Soup Chicken Roll (ထိုငျးစှပျကွကျသားလိပျ)(ထိုင်းစွပ်ကြက်သားလိပ်)
Chicken Claws (ကွကျခွထေောကျပေါငျး)(ကြက်ခြေထောက်ပေါင်း)
Steamed Spareribs with Black Beans (ဝကျနံရိုးပေါငျး) (ဝက်နံရိုးပေါင်း)
Tasty Lo-Mai-Kai (ကွကျသားကောကျညှငျးခှကျ)(ကြက်သားကောက်ညှင်းခွက်)
Steamed Fish Cake Ball (ငါးဖယျလုံးပေါငျး)(ငါးဖယ်လုံးပေါင်း)
Steamed Fried Fish Cake Ball (ငါးဖယျလုံးကွျောပေါငျး)(ငါးဖယ်လုံးကြော်ပေါင်း)
Chicken Soup with Bun (ကွကျသားစှပျပေါကျစီ)(ကြက်သားစွပ်ပေါက်စီ)
BBQ Buns (Chicken) (ကွကျသားကငျပေါကျစီ)(ကြက်သားကင်ပေါက်စီ)
Deep Fried Sesame Balls (နှမျးလုံးကပျကွျော)(နှမ်းလုံးကပ်ကြော်)
Fried Shrimp with Glutinous Rice Dumpling (ပုစှနျထောပတျကောကျညှငျးမုနျ့ဖကျထုပျ) (ပုစွန်ထောပတ်ကောက်ညှင်းမုန့်ဖက်ထုပ်)
Fried Prawn with Beancurd Roll (ပုစှနျပဲပွားလိပျကွျော) (ပုစွန်ပဲပြားလိပ်ကြော်)
Fried Shrimp Dumping (ပုစှနျဖကျထုပျကွျော)(ပုစွန်ဖက်ထုပ်ကြော်)
Chicken Floss Porridge (ကွကျသားဆနျပွုတျ)(ကြက်သားဆန်ပြုတ်)
Fried Chicken Dumping (ကွကျသားဖကျထုပျကွျော)(ကြက်သားဖက်ထုပ်ကြော်)
Steamed Pork with Rice (ဝကျသားပေါငျးထမငျး)(ဝက်သားပေါင်းထမင်း)
Braised Beef with Rice (အမဲသားနှပျထမငျး)(အမဲသားနှပ်ထမင်း)
Fried Chicken with Rice (ကွကျသားတုံးကွျောထမငျး)(ကြက်သားတုံးကြော်ထမင်း)
Fried Slice Chicken with Rice (ကွကျသားပွားကွျောထမငျး)(ကြက်သားပြားကြော်ထမင်း)
Steamed Chicken Thigh with Rice (ကွကျပေါငျပေါငျးထမငျး)(ကြက်ပေါင်ပေါင်းထမင်း)
Beef Noodle (အမဲသားခေါကျဆှဲ)(အမဲသားခေါက်ဆွဲ)
Spicy Beef Noodle (အမဲသားခေါကျဆှဲအစပျ)(အမဲသားခေါက်ဆွဲအစပ်)
Steamed Pork Ribs with Noodle (နံရိုးပေါငျးခေါကျဆှဲ)(နံရိုးပေါင်းခေါက်ဆွဲ)
Pork Ball with Noodle (ဝကျသားလုံးခေါကျဆှဲ)(ဝက်သားလုံးခေါက်ဆွဲ)
Dumpling with Noodle (ဖကျထုပျခေါကျဆှဲ)(ဖက်ထုပ်ခေါက်ဆွဲ)
Chilli Panmi Noodle (ခြီလီပနျးမီခေါကျဆှဲ)(ချီလီပန်းမီခေါက်ဆွဲ)
Steamed Pork with Noodle (ဝကျသားပေါငျးခေါကျဆှဲ)(ဝက်သားပေါင်းခေါက်ဆွဲ)
Steamed Chicken Thigh with Noodle (ကွကျပေါငျပေါငျးခေါကျဆှဲ)(ကြက်ပေါင်ပေါင်းခေါက်ဆွဲ)
Tom Yum Panmi Noodle (တုံယမျးပနျးမီခေါကျဆှဲ)(တုံယမ်းပန်းမီခေါက်ဆွဲ)
Taiwan Style Clay Pot Chicken (ထိုငျဝမျကွကျသားမွအေိုး)(ထိုင်ဝမ်ကြက်သားမြေအိုး)
Taiwan Style Fried Slice Chicken (ထိုငျဝမျကွကျသားပွားကွျော)(ထိုင်ဝမ်ကြက်သားပြားကြော်)
Taiwan Style Fried Chicken (ထိုငျဝမျကွကျသားတုံးကွျော)(ထိုင်ဝမ်ကြက်သားတုံးကြော်)
Fried Dumpling (ဖကျထုပျကွျော)(ဖက်ထုပ်ကြော်)
Spicy Dumpling (ဖကျထုပျအစပျ) (ဖက်ထုပ်အစပ်)
Taiwan Fried Rice (ထိုငျဝမျထမငျးကွျော)(ထိုင်ဝမ်ထမင်းကြော်)
Nan Gyi Salad (နနျးကွီးသုပျ)(နန်းကြီးသုပ်)
Noodle Salad (ခေါကျဆှဲသုပျ)(ခေါက်ဆွဲသုပ်)
Moh Ti Salad (မုနျ့တီသုပျ)(မုန့်တီသုပ်)
Tofu Salad (တို့ဟူးသုပျ)(တို့ဟူးသုပ်)
Lemon Salad (ရှောကျသီးသုပျ)(ရှောက်သီးသုပ်)
Burmese Pennywort Salad (မွငျးခှာရှကျသုပျ)(မြင်းခွာရွက်သုပ်)
Tomato Salad (ခရမျးခဉျြသီးသုပျ)(ခရမ်းချဉ်သီးသုပ်)
Papaya Salad (သင်ျဘောသီးသုပျ)(သင်္ဘောသီးသုပ်)
Mix Salad (အစုံသုပျ)(အစုံသုပ်)
Fish Cake Salad (ငါးဖယျသုပျ)(ငါးဖယ်သုပ်)
Rice + Egg Curry + Side Dishes + Mixed Assorted Vegetables (ထမငျးဖွူ+ဘဲဥဆီပွနျ+အရံဟငျး+တို့စရာစုံ)(ထမင်းဖြူ+ဘဲဥဆီပြန်+အရံဟင်း+တို့စရာစုံ)
Rice + Burmese Caramelised Pork + Side Dishes + Mixed Assorted Vegetables (ထမငျးဖွူ+ဝကျသနီခကျြ+အရံဟငျး+တို့စရာစုံ)(ထမင်းဖြူ+ဝက်သနီချက်+အရံဟင်း+တို့စရာစုံ)
Rice + Scrambled Fish Curry + Side Dishes + Mixed Assorted Vegetables (ထမငျးဖွူ+ငါးမှေ+အရံဟငျး+တို့စရာစုံ)(ထမင်းဖြူ+ငါးမွှေ+အရံဟင်း+တို့စရာစုံ)
Rice + Chicken Liver & Gizzard + Side Dishes + Mixed Assorted Vegetables (ထမငျးဖွူ+ ကွကျသဲမွဈ+အရံဟငျး+တို့စရာစုံ)(ထမင်းဖြူ+ ကြက်သဲမြစ်+အရံဟင်း+တို့စရာစုံ)
Rice + Steamed Pork Ribs + Side Dishes + Mixed Assorted Vegetables (ထမငျးဖွူ +ဝကျနံရိုးပေါငျး+ အရံဟငျး+ တို့စရာစုံ)(ထမင်းဖြူ +ဝက်နံရိုးပေါင်း+ အရံဟင်း+ တို့စရာစုံ)
Rice + Fried Fish + Side Dishes + Mixed Assorted Vegetables (ထမငျးဖွူ+ငါးကွျော+ အရံဟငျး +တို့စရာစုံ)(ထမင်းဖြူ+ငါးကြော်+ အရံဟင်း +တို့စရာစုံ)
Rice + Pork Ball Curry + Side Dishes + Mixed Assorted Vegetables (ထမငျးဖွူ+ ဝကျသားလုံးဆီပွနျ+ အရံဟငျး+ တို့စရာစုံ)(ထမင်းဖြူ+ ဝက်သားလုံးဆီပြန်+ အရံဟင်း+ တို့စရာစုံ)
Rice + Chili Fried Catfish + Side Dishes + Mixed Assorted Vegetables (ထမငျးဖွူ + ငါးခူ ငွုပျ သီးကွျော+အရံဟငျး+ တို့စရာစုံ)(ထမင်းဖြူ + ငါးခူ ငြုပ် သီးကြော်+အရံဟင်း+ တို့စရာစုံ)
Rice + Lobster Curry + Side Dishes + Mixed Assorted Vegetables (ထမငျးဖွူ + ပုဇှနျထုတျဆီပွနျ +အရံဟငျး+ တို့စရာစုံ)(ထမင်းဖြူ + ပုဇွန်ထုတ်ဆီပြန် +အရံဟင်း+ တို့စရာစုံ)
Rice + Pork Ball + Side Dishes + Mixed Assorted Vegetables (ထမငျးဖွူ+ ဝကျသားလုံး+အရံဟငျး+ တို့စရာစုံ)(ထမင်းဖြူ+ ဝက်သားလုံး+အရံဟင်း+ တို့စရာစုံ)
Rice + Sweet Pork with Egg Tender Curry + Side Dishes + Mixed Assorted Vegetables (ထမငျးဖွူ+ ဝကျခြို ဘဲဥနှပျ +အရံဟငျး+ တို့စရာစုံ)(ထမင်းဖြူ+ ဝက်ချို ဘဲဥနှပ် +အရံဟင်း+ တို့စရာစုံ)
Rice + Fish Cake Curry + Side Dishes + Mixed Assorted Vegetables (ထမငျးဖွူ+ ငါးဖယျဆီပွနျ+အရံဟငျး+ တို့စရာစုံ)(ထမင်းဖြူ+ ငါးဖယ်ဆီပြန်+အရံဟင်း+ တို့စရာစုံ)
Rice + Pork Leg + Side Dishes + Mixed Assorted Vegetables (ထမငျးဖွူ+ ဝကျလကျ +အရံဟငျး+ တို့စရာစုံ) (ထမင်းဖြူ+ ဝက်လက် +အရံဟင်း+ တို့စရာစုံ)
Rice + Chicken Curry + Side Dishes + Mixed Assorted Vegetables (ထမငျးဖွူ +ကွကျသားဆီပွနျ + အရံဟငျး+ တို့စရာစုံ)(ထမင်းဖြူ +ကြက်သားဆီပြန် + အရံဟင်း+ တို့စရာစုံ)
Nasi Lemak Xtra
Fried Tofu (တို့ဟူးကွျော) (တို့ဟူးကြော်)
Malar Curry (မာလာဟငျး)(မာလာဟင်း)
Rice Salad Bowl (ဇလုံထမငျး)(ဇလုံထမင်း)
Pickled Tea Leaf Salad (လကျဖကျသုပျ)(လက်ဖက်သုပ်)
Ginger Salad (ဂငျြးသုပျ)(ဂျင်းသုပ်)
Century Egg Salad (ဆေးဘဲဥသုပျ (or) ဖီတနျသုပျ)(ဆေးဘဲဥသုပ် (or) ဖီတန်သုပ်)
Seaweed Salad (ကြောကျပှငျ့သုပျ)(ကျောက်ပွင့်သုပ်)
Pork Salad (ဝကျသားသုပျ)(ဝက်သားသုပ်)
Fried Dumpling (ဖကျထုတျကွျော)(ဖက်ထုတ်ကြော်)
Mala Potato (အာလူးမာလာ)(အာလူးမာလာ)
Steamed Mushroom (မှိုပေါငျး)(မှိုပေါင်း)
Kachin Style Steamed Fish (ကခငျြငါးပေါငျး)(ကချင်ငါးပေါင်း)
Kachin Style Pounded (ကခငျြထောငျး) (ကချင်ထောင်း)
Traditional Bamboo Tray Meal (စကောထမငျး)(စကောထမင်း)
Kachin Style Rice Salad (ကခငျြထမငျးသုပျ)(ကချင်ထမင်းသုပ်)
Kachin Style Mutton Salad with Rice (ကခငျြဆိတျထောငျးထမငျး)(ကချင်ဆိတ်ထောင်းထမင်း)
Pae Pote with Rice (ပဲပုတျထမငျး)(ပဲပုတ်ထမင်း)
Traditional Rice (ရိုးရာထမငျး)(ရိုးရာထမင်း)
Cheese Roll -6pcs
Kani Maki - 12 pcs
Ebi Katsu Maki - 12pcs
Chicken Sausage Maki - 12 pcs
Chicken Katsu Maki - 12 pcs
Kani Salad (Crab)
Chicken Chachu Ramen
Chicken Karrage Set
(Fried chicken, miso soup, kimchi)
Chicken Karrage & Garlic Friedrice Set
Kuai Tiao Thai Noodle (ကှတေီ့ယို)(ကွေ့တီယို)
Sweet Corn Pounded (ပွောငျးဖူးထောငျး)(ပြောင်းဖူးထောင်း)
Palatue Small Noodle Pounded (ပလာတူးမုနျ့ဖတျထောငျး)(ပလာတူးမုန့်ဖတ်ထောင်း)
All Seafood with Glass Noodle Salad (ပငျလယျစာအစုံပဲကွာဇံသုပျ)(ပင်လယ်စာအစုံပဲကြာဇံသုပ်)
Malt Pounded (မုယောထောငျး)(မုယောထောင်း)
All Seafood with Mama Pounded (ပငျလယျစာအစုံမားမားထောငျး)(ပင်လယ်စာအစုံမားမားထောင်း)
Seafood Seaweed Salad (ပငျလယျစာကြောကျပှငျ့သုပျ)(ပင်လယ်စာကျောက်ပွင့်သုပ်)
All Seafood Pounded (ပငျလယျစာအစုံထောငျး)(ပင်လယ်စာအစုံထောင်း)
Thai Style Papaya Pounded (ယိုးဒယားသင်ျဘောသီးထောငျး)(ယိုးဒယားသင်္ဘောသီးထောင်း)
Chicken Feet with Enoki Mushroom Pounded (ကွကျခွထေောကျအပျမှိုထောငျး)(ကြက်ခြေထောက်အပ်မှိုထောင်း)
Octopus Salad (ရဘေဝဲထောငျး) (ရေဘဝဲထောင်း)
Masala Crab Curry (ဂဏနျးမဆလာခကျြ)(ဂဏန်းမဆလာချက်)
Thai Style Bean Vermicelli Salad (ယိုးဒယားပဲကွာဆံသုပျ)(ယိုးဒယားပဲကြာဆံသုပ်)
Fried Mackerel Served with Rice Vermicelli and Fresh Vegetable (ခေါကျဆငျ့ပါထူး)(ခေါက်ဆင့်ပါထူး)
Mix Fruit Salad (သီးစုံထောငျး)(သီးစုံထောင်း)
Meat Ball Salad (အသားလုံးထောငျး)(အသားလုံးထောင်း)
Basil Leave with Rice (ဖကျကဖောငျးထမငျး)(ဖက်ကဖောင်းထမင်း)
Grilled Pork Shoulder with Papaya Salad (ဝကျဂုတျသားကငျ သင်ျဘောသီးထောငျး)(ဝက်ဂုတ်သားကင် သင်္ဘောသီးထောင်း)
Mixed Salad (ရောသမထောငျး)(ရောသမထောင်း)
Fried Rice with Seafood (အန်ဏဝါထမငျးကွျော)(အန္ဏဝါထမင်းကြော်)
Seafood Salad (အန်ဏဝါထောငျး)(အန္ဏဝါထောင်း)
Chick & Cheese Burger
Egg & Cheese Sandwich with French Fries
Beef & Cheese Sandwich with French Fries
Chicken & Cheese Sandwich with French Fries
The Street Steak with Mashed Potato
Grilled Cheesy Prawn with Mashed Potato
Grilled Chicken Wings with BBQ Sauce & Mashed Potato
Meat Ball Shakshuka
Chicken Ball Shakshuka
Healthy Choice Mala Set
(Water spinach/ kang kong, small, chye sim, lotus root, red pepper, fish in beancurd skin, tofu)(ထိုငျဝမျကနျစှနျးရှကျ, ပွောငျးဖူး အသေး, မုနျညငျးစိမျး, ကွာစှယျ, ငရုတျပှ (နီ), ငါးပဲပွားလိပျ, ပဲပွား) (ထိုင်ဝမ်ကန်စွန်းရွက်, ပြောင်းဖူး အသေး, မုန်ညင်းစိမ်း, ကြာစွယ်, ငရုတ်ပွ (နီ), ငါးပဲပြားလိပ်, ပဲပြား)
Healthy Choice Soup Set
Healthy Choice Tom Yum Set
Healthy Choice Dry Set
Assorted Dry Set
(Chicken Sausage, Lobster Ball, Fish Tofu, Tofu, Red Pepper, La Mian)(ကွကျအူခြောငျး, ကြောကျပုဇှနျလုံး, ငါးတို့ဖူး, ပဲပွား, ငရုတျပှ (နီ), ခေါကျဆှဲ)(ကြက်အူချောင်း, ကျောက်ပုဇွန်လုံး, ငါးတို့ဖူး, ပဲပြား, ငရုတ်ပွ (နီ), ခေါက်ဆွဲ)
Assorted Soup Set
Seafood Tom Yum Set
Seafood Mala Set
Low Carbohydrate Dry Set
Low Carbohydrate Soup Set
Low Carbohydrate Mala Set
Low Carbohydrate Tom Yum Set
Fish Favor Dry Set
Fish Favor Soup Set
Fish Favor Mala Set
(Fish in Beancurd Skin, Brinjal/Eggplant, Lady Finger, Red Pepper, Fish Cake, Kway Tiao) (ငါးပဲပွားလိပျ, ခရမျးသီး, ရုံးပတီသီး, ငရုတျပှ (နီ), ငါးအသားပွား, ဆနျပွား/ညှပျ)(ငါးပဲပြားလိပ်, ခရမ်းသီး, ရုံးပတီသီး, ငရုတ်ပွ (နီ), ငါးအသားပြား, ဆန်ပြား/ညှပ်)
Brown Sugar Thai Tea
Mango Jasmine Fruit Tea
Peach Jasmine Fruit Tea
Kiwi Jasmine Fruit Tea
Blueberry Jasmine Fruit Tea
Strawberry Jasmine Fruit Tea
Passion Fruit Chizu
Blueberry Jasmine Chizu
Strawberry Jasmine Chizu
Salted Plum Fruit
Crab Lover (ဂဏနျးမာလာ)(ဂဏန်းမာလာ)
Includes 500g of crab, cooked with our authentic sauce.
(9800ks + extra charge packaging 500ks)
Seafood Set - Regular (မာလာရှမျးကော ပငျလယျစာ)(မာလာရှမ်းကော ပင်လယ်စာ)
Mala Xiang Guo set with varieties of seafood, fish balls, mushroom, noodle and assorted vegetables. Enough for2to3pax.
(13800ks + extra charge packaging 500ks)
Prawn Lover Set - Regular (မာလာရှမျးကော ပုဇှနျ)(မာလာရှမ်းကော ပုဇွန်)
Mala Xiang Guo set with prawns, mushroom, noodles and assorted vegetables. Enough for2to3pax.
(19800ks + extra charge packaging 500ks)
Exotic Seafood Set - Regular (မာလာရှမျးကော ပငျလယျစာရှယျ)(မာလာရှမ်းကော ပင်လယ်စာရှယ်)
Mala Xiang Guo set with scallops, bamboo clams, mussels, fish balls, mushroom, noodle & assorted vegetables. Enough for2to3pax.
(22800ks + extra charge packaging 500ks)
Pork Set - Regular (မာလာရှမျးကော ဝကျ)(မာလာရှမ်းကော ဝက်)
Mala Xiang Guo set with varities of pork, meatballs, mushroom, noodles & assorted vegetables. Enough for2to3pax.
Chicken Set - Regular (မာလာရှမျးကော ကွကျ)(မာလာရှမ်းကော ကြက်)
Mala Xiang Guo set with varities of chicken, meatballs, mushroom, noodles & vegetables. Enough for2to3pax.
Mushroom Lover Set - Regular (မာလာရှမျးကော မှို)(မာလာရှမ်းကော မှို)
Mala Xiang Guo set with many varities of assorted mushroom, noodles & vegetables. Enough for2to3pax.
(8800ks + extra charge packaging 500ks)
Twin Set (Chicken) (မာလာရှမျးကော အမှာ)(ကွကျ)(မာလာရှမ်းကော အမွှာ)(ကြက်)
Mala Xiang Guo chicken set, suitable for two pax for individual consumption. Comes with2spearated boxes with rice & fruit.
(9600ks + extra charge packaging 500ks)